Nagu saabsan | AIRTOX Company
KU SAABSAN AIRTOX SHIRKADDA
HALKAN AYAAD KA HELI KARNAA AYAAN nahay, WAXAAN SAMAYNAYNA SIDII AAN U CADAADO NABADA badbaadada ugu wanaagsan
Halyeeyga ah AIRTOX
NABADA DANISHKA IYO HORUMARKA
MUUQAALKA & MUUQAALKA
DIIWAANKA DHAQANKA AIRTOX
AIRTOX® - kabaha halista ah ee badbaadada deenishka oo ay ka buuxaan tikniyoolajiyadda berri. Bixinta raaxada sare iyo iftiinka aan la arkin suuqa xirfadeed. Maaddaama aan nahay shirkad deenish ah oo soosaara kabaha, wax tanaasul ah kuma sameynayno!
At Airtox, kabaha ayaan u qalabeyneynaa teknoolojiyadda ugu hal-abuurka badan uguna hooseeya ee weligood lagu arko warshadaha kabaha badbaadada. Kabahayagu waxay soo bandhigaan xiddigo suulasho ilaalin ah, iska caabin aan caadi aheyn iyo lakabyada ugu fudud ee ka hortagga galmada ee suuqa. Kabahayaga nabadgelyadu waxay leeyihiin soodhadhka elektiroonigga ah ee loo yaqaan 'Electrostatic Dissipating soles' (ESD) iyo murugo la yaab leh oo ah dareemooyin qabow. Airtox Kabaha badbaadada ayaa leh iftiin qafiif ah oo dhexdhexaad ah iyo dabacsanaan dibadda ah. Waxaa intaa u dheer tan, AIRTOX Kabaha badbaadada waxay kaloo isticmaalaan biyo-aan-celin iyo dabeysha lagu neefsado, Nidaamka Mashiinka Mashiinka Dot Direct Multi iyo Scandinavian ballaaran. Kuwani waa dhowr ka mid astaamaha sameeya AIRTOX kabaha amniga waa kabaha amniga ugu fiican ee suuqa.
AIRTOX waa sumcad horumar leh oo ah kabaha badbaadada toos uga bax Denmark.
Waxaan sameyneynaa Kabaha badbaadada la tayada gaarka ah iyo raaxada, inta wali la joogo horyalka iyo moodada isticmaalka sanadka oo dhan.
Waqtigan xaadirka ah, AIRTOX badeecada waxaa si gaar ah loogu iibiyaa dukaamada la xushay Yurub. Hadafkayagu waa inaan ballaarino raadkeenna adduunka oo aan alaabteenna ka helno dalal badan mustaqbalka dhow, si dad badani u raaxaystaan ​​kabahayaga badbaadada badan ee ka yimaada Danmark.
Hada, waxaan diirada saareynaa horumarinta iyo waxsoosaarka kabaha badbaadada, iyo iibinta alaabadayada adduunka oo dhan tiro aad u tiro badan B2B. Marka lagu daro hadafkayaga caalamiga ah, inaan hubino taageerada joogtada ah ee ganacsatada maxalliga ah ee Airtox, waxaan sidoo kale lashaqeeynaa shirkadaha yar yar, iyo qoysaska kaxeeya, kuwaas oo aan si xoogan ula shaqeynayno si aan u dhisno xiriirro guul leh oo waara. Tani waa wax aan aad ugu mahadnaqno.
Fiiri kabahayaga badbaadada
Halyeeyga ah AIRTOX brand
Wejiga Rabbiga Airtox sumadda waa astaamo, shimbiro xoogaa saadaalin ah. Waa maxay asalkiisu? Muxuu metelaa? Maxayse la xiriirtaa mustaqbalka kabaha badbaadada?
The AIRTOX Shimbiraha ayaa ku soo taabtay Dhulka ka yimid meeraha fog ee ka baxsan Nidaamkayaga Solar. Iyagu waa dad caqli badan, dad farsamo leh oo leh caqli horumarsan.
Waxay u yimaadeen dhulka iyo - sabab aan la garanayn, waxay bilaabeen inay abuuraan kabo leh waxyaabo gaar ah, oo aan waligood lagu arkin warshadaha kabaha. Waxay la wadaagaan badeecadan kacaanka ah aadanaha. Ma hubtid sida aad ugu xiriireyso iyaga maadaama xiriirkooda aadanaha uu la yeesho qaabab kala duwan.
Waxaa la yaab leh, mid ka mid ah buullooyinka ugu badan ee xoogga AIRTOX shimbiraha waxaa laga heli karaa madaarka Kobanheegan. Halkaas ayay uga safraan masaafo aad u ballaaran, badiyaa adhiga, si ay ugu fidiyaan dadkooda adduunka oo dhan.
Waxbadan kama ogin iyaga, laakiin waxa aan ognahay waa, in the AIRTOX Shimbiraha waa kuwa aan la saadaalin karin, si dhakhso leh ayey u horumariyaan, oo waxay aad uga horumarsan yihiin teknoloji ahaan waxkastoo Dhulka ku yaal. Aqoonta iyo teknolojiyadda ay nala wadaagaan, waxay nolosheenna ka dhigaan mid deggan, roon oo aamin ah.
Ujeedada sheekada ayaa ah in la abuuro jahwareer shimbireedkan, kaas oo gacanta ku haya AIRTOX Qeybinta R & D oo leh hadaf ah in la keeno teknoolojiyada cusub ee Dunida Laga soo bilaabo xagjirnimada, taas oo noo oggolaaneysa inaan abuurno kabaha ugu casrisan uguna raaxada badan Kabaha lagu buuxiyay waxyaabaha ugu caansan uguna dhowaa tiknoolajiyada adduunka.
Naqshadeynta deenishka iyo horumarinta kabaha badbaadada ugu wanaagsan
AIRTOX xarunta xaruntiisu waa Denmark. Laga soo bilaabo halkan, dhammaan qaabeynta, horumarka iyo cilmi baarista ayaa la fuliyaa. Waxaan uqornay waqti badan iyo agab cilmi baarista teknolojiyada, iyo agabyada tijaabada, qaybaha iyo nidaamyada cusub.
Kooxdayada R & D waxay leeyihiin 20 + sano oo khibrad u leh kabaha badbaadada waxayna la socdaan dhammaan howlaha horumarka, laga bilaabo naqshadeynta naqshadeynta koowaad illaa badeecada ugu dambeysa.
Waxaan tijaabineynaa wax soo saarkooda waxsoosaarka ugudambaysta ugu weyn
Waxaan dammaanad ka qaadaynaa isku halaynta iyo tayada dhammaan alaabooyinkayada. Si ka duwan qayb badan oo ka mid ah tartamayaasheena, ma yeelno tanaasul. Muhiimadeena waa qancinta macaamiisheena.
WAA INAAN ISTICMAALO FARSAMADA FARSAMADA
Hada waxaa jira shan teknoolajiyada in lagu heli karo Airtox xulashada kabaha, Aqua-Cell®, WHITELAYER®, UTURN®, Cool&Me® iyo POWERBREEZE®. Teknolojiyaddan si taxaddar leh ayaa loo farsameeyay by AIRTOXqaybta gaarka ah “Lab Lab 32”.
WAXAAN KA FAHANNAA IN AAD KA HESHID QAADKA
At AIRTOX Waxaan firfircoon nahay horumarinta iyo baarista isbeddelo cusub oo ku saabsan warshadaha kabaha badbaadada. Waxaan hiigsaneynaa inaanu hal abuurnimo ku sii jirno safka hore ee warshadaha. Tiknoolajiyad cusub oo aan wali laga hirgalin gudaha Airtox badeecada waa la tijaabiyaa, iyo faa iidooyinka hordhaca ah ayaa looga hadlay si loo hubiyo taas AirtoxKabaha badbaadada khafiifka ah ee culus ayaa ah kuwa ugu horumarsan suuqa.
Hadafka & himilada
Himiladeena iyo himiladeenna guud waa in aan noqono shayga u gaarka ah uguna hal-abuurka badan qaybta amniga warshadaha.
Si aan u gaarno himiladaan, waxaan hadda ku jirnaa howl si aan uga faa'iideysanno aqoonta iyo dhiirrigelinta dhaqamada adduunka. Waxaan tan u sameyneynaa annaga oo kaashanayna dadka iyo shirkadaha adduunka oo dhan iyo annaga oo aagga shaqadeena ka dhisno deegaan waddaniyad badan leh.
Inta lagu gudajiro howsha shaqada, waxaan diiradda saareynaa mas'uuliyadaha bulshada iyo duruufaha shaqo ee weyn si aan u hubinno in dhiirigelinta iyo u hibeynta qof kasta oo ay wada shaqeeyaan uu dardar gelinayo dhammaystir.
Waxaan danaynaynaa ilaalinta bay'adeena waxaanna hubinaynaa in annaga iyo dhammaan alaab-qeybiyeyaasheena ay ka go'an tahay inaan si adag u raacno dhammaan shuruucda deegaanka iyo maxalliga ah.
Xirfadlaha AIRTOX iyo masuuliyada bulshada:
Muhiimadeena ayaa ah inaan siino shaqaalahayaga shuruudaha shaqada ee ugu wanaagsan. Waxaan aaminsanahay inay muhiimad weyn leedahay in la abuuro goob shaqo oo raaxo leh si loo hubiyo in shaqaalaheenu ay door firfircoon ka ciyaaraan horumarka wanaagsan ee shirkaddayada. Sidaa daraadeed waxaan haysanaa hab furan, kala-takoor la'aan ah ee shaqaalaheenna iyo la-hawlgalayaashayada oo aan hubinno in kala duwanaanshaha iyo is-hormarinta ay taageerayaan.
Waxaan raacnaa Xeerka Anshaxa guud ee caalamiga ah, oo ka kooban dhowr mabaadi 'asaasi ah oo ku saabsan anshaxa iyo dhaqanka mas'uuliyadda ah oo ku saleysan adduunka oo dhan. Dhammaan alaab-qeybiyeyaashayada iskaashi la leh waxaan dammaanad ka qaadeynaa waxyaabaha soo socda: dhammaan xiriirada shaqada waxay u hoggaansami doonaan baahiyaha aasaasiga ah sida ku xusan heshiisyada Qaramada Midoobay.
Waxaan had iyo jeer raadinaa karti cusub si aan ugu biirno kooxdeena. Haddii aad geesi u tahay inaad ka shaqeyso deegaankeena xiisaha leh, xawaaraha badan iyo hal-abuurka, dalbo oo noo sheeg naftaada!